www.kyawhtet.blogspot.com: November 2007
Asian Leaders Will Avoid Sanctions, Rebuke on Myan...
Asian Leaders Will Avoid Sanctions, Rebuke on Myanmar (Update1)
Nov. 18 (Bloomberg) -- Myanmar is unlikely to faceacall for sanctions or evenapublic rebuke over its crackdown on democracy protestors when leaders of 10 Southeast Asian nations discuss the military junta in Singapore this week, analysts said.
Rights groups, Western governments and lawmakers in the region have called for the Association of Southeast Asian Nations to takeastronger stance against Myanmar following September's crackdown on pro-democracy demonstrators in which more than 100 people died, according to the United Nations.
Asean governments have so far rebuffed that call, and another to strengthen the constitution the group is expected to adopt, its first in 40 years.
``I don't think there will be any public statements or rebuke on the situation in Myanmar,'' said Hiro Katsumata,aregional analyst at Singapore's Institute of Defense and Stategic Studies. ``Any Asean meeting is largely ceremonial. That is the purpose of this summit, too, to display the unity of the members. I don't think we will see any strong statement or outrage.''
Still Myanmar will dominate discussions by Asean leaders from Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, the Philippines, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. It hasacombined population of 570 million and gross domestic product of about $1 trillion. China, South Korea, Japan, and Australia will also be at the summit.
In its 40-year history, Asean has upheld dual policies of non- interference in member countries' affairs and decision-making by consensus among all members, both of which are included inadraft of the charter. The draft hasaprovision that allows Asean to formahuman rights body.
``I call on Asean next week to give teeth to the Asean Charter by appointingahuman rights rapporteur or monitor,'' Malaysian opposition leader Lim Kit Siang said in an e-mailed statement. This is to ``ensure Asean nations, in particular Myanmar, respect the human rights commitments enunciated in the Asean charter.''
Asean admitted Myanmar in 1997 against opposition from the U.S. and the European Union. Myanmar's military junta is also under fire for its detention of hundreds of political prisoners, including Nobel laureate Aung San Suu Kyi, the opposition's leader.
Asean Secretary General Ong Keng Yong has admitted the situation in Myanmar has dampened the ``positive vibes'' surrounding the Singapore summit.
The draft of the charter showed that the group has rejected proposals bya10-person group of ``Eminent Persons'' to censure, ban or expel errant members by vote.
``Indeed, there have been strident calls to bring down the military regime,'' Singapore Foreign Minister George Yeo said last month. Sanctions or expulsion of Myanmar from Asean ``would make national reconciliation harder, not easier to achieve,'' Yeo added.
He also said that sanctions, like those recently imposed by the U.S. and the EU, would have limited impact on the junta, which has ruled the country formerly known as Burma since 1962.
``We don't believe sanctions work, we have never believed in that,'' said former Indonesian foreign minister Ali Alatas,amember of Asean's ``Eminent Persons Group,'' in an interview with Bloomberg. ``But we have to admit that our approach also has not yielded the kind of results that we have wanted to see. It's much too slow, and therefore we have to see what we can do at the summit.''
Even if international pressure led to elections, said Indonesian Defense Minister Juwono Sudarsono in an interview, the military's role would be paramount in the country.
``For all its faults, the military at the moment remains the unifying force,'' Sudarsono said, ``and covers most of the levers of power, political, economic and also cultural.''
French Foreign Minister Bernard Kouchner said he would try to get Asean to agree toaseries of set principles on Myanmar ataAsean-EU summit on Nov. 22.
``Words can only get us so far. We have to see the effort, consistently, pushing Myanmar in the right direction,'' said Simon Tay, the chairman of the Singapore Institute of International Affairs.
``Asean can no longer be used by the military junta asacover,'' said Singapore parliamentarian Charles Chong. ``We have tried softer means of persuasion for more than 10 years already without much success and it is really time to takeafresh approach.''
``They talk big, but there will be no implementation,'' said Katsumata of the Institute of Defense and Stategic Studies. ``Asean is slow to implement anything they talk about.''
To contact the reporter on this story: En-Lai Yeoh in Singapore at at eyeoh1@bloomberg.net
Last Updated: November 17, 2007 22:34 EST
Posted by ကျော်ထက် at 9:13 PM0comments Links to this post
မနှင်းသဇင်က ကျနော်ကို ကြောက်တတ်တဲ့ အကောင်တွေအကြောင်းကို ရေးပေးဖို့Tag လိုက်တော့ ကျနော်လည်း ငါ ဘာကြောက်တတ်သလဲဆိုတာကို စဉ်းစားခန်း ဖွင့်ရတော့တယ်။ ငယ်ငယ်ကလေးတည်က တောထဲ တောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့တော့ တော်တော့်ကို စဉ်းစားယူနေရတယ်။
ပြီးတော့ ငါက ဒီအကောင်ကို ကြောက်တာလား မုန်းတာလားဆိုတာကိုလည်း ပြန်စဉ်းစားရင်နဲ့အကောင်တွေ တော်တော်များများဟာ ပယ်ဖျက်တဲ့အထဲ ပါသွားတယ်။ ဥပမာ။ ခြင်။ ခြင်ဆိုတာက အကောင်သေးသေးလေးဆိုတော့ ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ သူ့ ကိုက မုန်းတာ။ သောက်မြင်ကပ်တာ။ ရွံတာ။
တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည်တော့လည်း လောကမှာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး သတ္တ၀ါ ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ လူတိုင်းလူတိုင်း ကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြွေ တောင်မှ သူ့ နေရာနဲ့သူ အကျိုးပြုနေတာကို တွေ့ ရတယ်။ လယ်သမား တွေအတွက်တော့ မြွေဟာ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ စပါးပေါ်ချိန်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ လယ်သမားတွေအတွက် မြွေဟာ မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်နေလို့ ပဲ။ လယ်ထဲမှာ ကြွက်တွေ မသောင်းကျန်အောင်လို့မြွေက ကာကွယ်ပေးတယ်လေး။ အဲ့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက့် မြွေဟာ ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်။ ပြီးတော့ မြွေဟာ သူ့ ကို မထိမခြင်း ဘာမှမလုပ်ဘူး။ သူ့ ကို ထိမှသာ လူကို အန္တရာယ်ပေးတာပါ။
အဲ့ ကျနော် ကြောက်တဲ့ တရိစ္ဆာန် နှစ်ကောင်တော့ရှိတယ်။ ပထမ အကောင်ကတော့ ကြွက်။ ကြွက်ဆိုတဲ့ အကောင်ဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အိမ်တအိမ်မှာ ကြွက်ကို ဘယ်လို ရှင်းရှင်း ရှင်းလို့ကို မရဘူး။ ခြင်းဆိုတာက ညဖက် ခြင်ထောင်ထောင်အိပ်ရင် ရတယ်။ ကြွက်က ညဖက်ဆိုရင် စသောင်းကျန်ပြီး ဟိုကိုက်ဒီကိုက်နဲ့ တော်တော်ကို စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်။ ကျနော့် ဘ၀မှာ ဒီနေ့ အချိန်အထိ ကြွက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေရတုန်းပဲ။ သူ့ အတွက်နဲ့စိတ်ညစ်ရတာလည်း နေ့တိုင်းပါပဲ။
ဒုတိယ တရိစ္ဆာန်တကောင်ကတော့ အကောင်နဲနဲ ကြီးတယ်။ သူ့ ကိုက ကြောက်တာထက် ရွံတယ်။ မုန်းတယ်။ အော့နှလုံးနာတယ်။ ကြည့်ကို မကြည့်ခြင်ဘူး။ အဲ့ဒီ တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ မျက်နှာတွေက တလောကလုံးက လူတွေက သူတို့ လုပ်စာ ထိုင်စားနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ။ ဘယ်သူ့ မှ လူမထင်ဘူးဆိုတဲ့ ရုပ်နဲ့ ( အဲ့မှားလို့သူတို့ က လူမှ မဟုတ်တာ) ။ အဲ့ဒီ တရိစ္ဆာန်တွေက လူ့ လောကအတွက်လည်း ဘာမှ အကျိုးမပြုဘူး။ သူ တို့တရိစ္ဆာန်အခြင်းခြင်းတော့ တော်တော်ကို အကျိုးပြုတယ်လို့တော့ပြောတာပါပဲ။ သူကတော့ တကိုယ်လုံးကို အစိမ်ရောင်ရှိတယ်လေ။ စာဖတ်သူပဲ ကိုယ့်ကိုကို စဉ်းစားကြည့်ပေတော့ ကျနော်ကတော့ ဖေါ်မပြတော့ပါဘူး။
တကယ်တော့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာကတည်းက ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ လူဆိုတာ မသိတာကို ကြောက်နေတာပါ။ တကယ်တမ်းသိအောင် ကျိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှ ကြောက်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ တကယ်တမ်း တော့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ မသိခြင်းပါပဲ။
ကျနော်လည်း ကျနော့်သူငယ်ချင်း စိုင်းစိုင်းတယောက် ဘာကြောက်တတ်လည်း မသိဘူးနော်။ သိခြင်လိုက်တာ
ဟယ်ဟယ်။ လုပ်ပေးပါဦး စိုင်းစိုင်းရေ
Posted by ကျော်ထက် at 9:18 PM0comments Links to this post
Labels: ကြောက်တတ်တဲ့ အကြောင်း
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန် အိုက်လိုအိုက်
မနေ့ ကလည်း တနေကုန်
ဒီနေ့ လည်း တနေကုန်ပြန်
ကုန် ကုန် ကုန်
ပေဖြစ်တော့ခံမယ် တူဖြစ်တော့ နှံမယ်
အမှန်တရား တို့ ဘက်မှာ ရှိတယ်
ပြည်သူအများ တို့ ဘက်မှာ ရှိတယ်
ကာလယန္တရား တို့ ဘက်မှာ ရှိတယ်
ရှင်တော်ဘုရား တို့ ဘက်မှာ ရှိတယ်
သိကြရဲ့ လား ဟားဟားဟားဟား
လှောင်အိမ်ထဲမှာ တလွန့် လွန့် နဲ့ 
ကျားညွှန့် တုံးတွေ ထင်းနေသလား
ဟားတိုက်လို့ရယ်ချင်စရာ
အရှင်းသား မလွဲသရွေ့ 
အထင်းသား စွဲသရွေ့ 
ကျားရဲ ဟာ ကျားရဲ
ငါလဲ အဲဒီလိုဘဲကွ ဟေ့။ ။
ဦးဝင်းတင် (ဟံသာ၀၀တီ) ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းထောင်တွင်းမှ ရေးစပ်ထားသည် ကဗျာတပါ။
Posted by ကျော်ထက် at 3:40 PM0comments Links to this post
Labels: ပြန်လည် တင်ပြချင်း
ဆောင်းနှင်းဖွေးဖွေးလေး တောင်းတန်းများကြားမှာ အေးချမ်းလှတဲ့ ကျနော်တို့မြို့ ကလေးကို အလည်တခေါက်အ ရောက်လာပါလားလို့ -----
စိုင်းဆိုင်မောဝ် ရဲ့သီချင်းလေးကို နားထောင်နေရင်းက အတိတ်ကို ပြန်လည်း ရောုက်ရှိသွားခဲ့မိတယ်ကွာ------
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပေါ်မြို့ကလေးမှာ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ ကျနော်အတွက်တော့ နှင်းတွေ ကျလာပြီး ဆိုရင်ပဲ မွေးရပ်မြေကို သတိတရ ရှိစမြဲပါပဲ။ အခုလို ဆောင်းတွင်မှာများဆိုရင် တောင်ပတ်လည်း ၀ိုင်းနေတဲ့ ကျနော်တို့ မြို့ကလေးမှာ နှင်းတွေနှင်းတွေကျလိုက်ပုံများ တယောက်နှင့် တယောက် မမြင်နိုင်လောက် အောင်ပါပဲ။
ဆောင်းရောက်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး နံနက်ခင်းထထပြေခဲ့တာကိုလည်း သတိရမိတယ်။ ညဖက်ည ဖက်တွေမှာ စက်ဘီးလေတွေ ကိုယ်စီကိုငှ စီးပြီးတော့ မြို့ နံစေတီဘုရားရှေ့ မှာ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထိုင်းရင်နဲ့ ခေတ်ပေါ်သီးချင်တွေကို နားထောင်ရတာလည်း အရသာတမျို့ ပါပဲ။ တခါတလေ လက်ဖက်ရည် မသောက် ချင်ရင်လည်း ရပ်ကွက်ထိပ်မှာ ဖွင့်ထာတဲ့ အကြော်ဆိုင်လေတွေမှာ သူငယ်ချင်းတစု အကြော်တပွဲ၊ ဆလပ်ရွက်တပွဲ နဲ့ ရေနွေးအ၀သောကရင်းက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကောင်းမလေးတွေကို (ခေါ်တောကုလားအကြည့်နဲ)့ ငန်းနေခဲ့တာကိုလည်း အမှတ်ရနေမိတယ်။
တဖြည်းဖြည်နဲ့ တန်ဆောင်တိုင်းတောင် ရောက်တော့မှာပါလားဆိုတဲ့အသိကလည်း မွေးရပ်မြေကို ပိုပြီးလွမ်းစေ မိတာ အမှန်ပါ။
တန်းဆောင်တိုင်လရောက်ပြီးဆိုရင်ဖြင့် ကျနော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်ကတော့ ပျော်မဆုံးနိုင်အောင် ပါပဲ။
တန်ဆောင်တိုင်လရောက်တိုင်း မီးပုးံပျံလွှတ်ပွဲ၊ ထင်းရူးတိုင်ထွန်းပွဲ တွေကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ နဲ့ ကျနော်တို့မြို့ ကလေးမှာသာ အထင်အရှား ကျင်းပစမြဲ ပဲလေး။ ထင်းရူးတိုင်ကို ထင်းရူးသားများကို ခွဲချမ်းပြီးတော့ ၀ါးပိုးဝါးများဖြင့် ပတ်ပြီးလျှင် ၄င်းထင်းရူးတိုင်အား မိရှို့ ရာတွင် လှပစေရန်အ တွက် ထင်းရူးတိုင် အထဲတွင် မိမိကိုတိုင်ပြုလုပ်ထားသည့် ဗျောက်အိုးများ၊ မီးရှုးများထည့်ထားရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တွင် နေဖူးသူတိုင်း လုပ်တတ်ပါသည်။
ထင်းရူးတိုင်ထွန်းပွဲကို တန်ဆောင်မုန်း လပြည်နေ့မှာ ကျင်းပစမြဲ ပါ၊ ရပ်ကွက်အလိုက် ထင်းရူးတိုင်တွေ လုပ်ပြီးတော့ တရပ်ကွက်နှင့် တရပ်ကွက် မီးပုံးပျံအလှပြိုင်ပွဲ၊ ဘုရားကားအလှပြိုင်ပွဲ။ ထင်းရူးတိုင်အလှ ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုးစုံ ကျင်းပကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ဘုရားကား၊ မီးကြာခွက်။ မီးပုံပျံ။ ထင်းရူးတိုင်း နဲ့ အိုးစည်ဗုံမောင်းအဖွဲ့ လည်း ပါရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်နေရာကို ထွက်ခွာဖို့ အတွက် ရှေ့ ဆုံးက အလှဆင်ထာတဲ့ ဘုရားကားက အရင်ထွက် ခွာရပါတယ်။ ဘုရားကားရဲ့ နောက်မှာ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အပျိုများနဲ့ ကလေးများက မီးကြာခွက်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ လမ်းဘေးတဖက်တချက်တွင် စီတန်လမ်းလျှောက်ပြီး လိုက်ရပါတယ်။ မီးကြာခွက် ရဲ့နောက်မှာမှ ထင်းရူးတိုင် ကို ထမ်းလာခဲ့တဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ က အိုးစည်းဗုံမောင်ကို တီးခတ်ကာ လိုက်ပါရ ပါတယ်။
လပြည့်နေ့ မရောက်ခင် သုံးလေးရက်အလိုကတည်းက ရပ်ကွက်အလိုက် ထင်းရူးတိုင်ကို လူငယ်တွေက ထမ်းပြီးတော့ မြို့ ထဲကို လှည့်လည်ပြီး နောက်ဆုံ မြို့ ကလေးရဲ့ထပ်မှာရှိ တဲ့ မြို့ နံစေတီရှိရာကို သယ်ဆောင်သွားရပါတယ်။ လှည့်လည်ရာ လမ်းတလျှောက်မှာလည်း
မီးမီ ဘယ်သူ့ မီး ------ လောဓမ္မမီး လောဓမ္မမီး
လောဓမ္မမီးကို နိုင်ချင်ရင် ဆယ်နှစ်ဆယ်မို ကြိုးစားပါဦး ဆိုတာမျိုးကို အော်လိုအော်
အချို့ လူငယ်တွေကလည်း လမ်းဘေးမှာ ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ အပျို လေးတွေကို စောင်းမြောင်ပြီးတော့
အိမ်တွင်းပုန်းတဲ့ အပျိုတွေ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် အော်လိုအော်ပေါ့
ရှမ်းအိုစည်းကလည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်းဆိုင်းတည်ပြီး လူငယ်တွေက တလမ်းလုံးက ပြီးတော့ ပျော်ပါးစွာ
မြို့ ကလေးမှာ ဆယ်သုံးရပ်ကွက်တည်း ရှိတဲ့အတွက် တရက်ကို သုံးရပ်ကွက်နှုံးဖြင် အလှည့် ကျစနစ်နဲ့ လှည့်လည်ရပါတယ်။ လှည့်လည်ရာတွင်လည်း ဒီနေ့ ကျနော်တို့ရပ်ကွက်က အလှည့်ကျရင် ကျန်တဲ့ ရပ်ကွက်က လူတွေက လမ်းဘေးတဖက်တချက် ပလက်ဖေါင်တွေပေါ်ကနေပြီးတော အားပေးကြစမြဲပါ။
မြို့ ထဲအနှံ့လှည့်လည်းပြသပြီး နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရာ နေရာကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဘုရားကားနှင့် မီးကြာခွက်ကို ကိုင်ဆောင်ထာတဲ့ သူတွေက ဘုရားကို သုံးပါတ်ပတ်ကာ မီးပူစော်ပြီး ထင်းရူးတိုင် ထမ်းလာ သည့်လူငယ်များကို ထင်းရူးတိုင်းထောင်ရန်အတွက်၎င်း။ မီးပုံးပျံ လွတ်တင်ဖို့ အတွက်၎င်း ပြင်ဆင်စရာရှိ တာများကို ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
ထင်းရူးတိုင်ကို စတင်ထွန်းညှိလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ရပ်ကွက်ထဲလူငယ်။အပျို၊ အအို၊ လူကြီးများပါ မကျံ ရှမ်းအိုးစည်းနဲ့ အတူ ကကြရတာ ပျော်စရာပါပဲ။ မိမိတို့ လုပ်လိုက်တဲ့ ထင်းရူးတိုင်နဲ့မီးပုံးပျံက အခြားရပ်ကွက်ထက် ပိုလှနေရင်တော့ မပြော ပါနဲ့တော့ ကလိုက်ပုံများ ကွေးလို့ဆိုတာမျိုးပဲ။
အနိုင်းအရှုံးကိုတော့ လပြည့်နေ့ ရောက်မှပဲ ကြေညာပါတယ်။
အဝေးတနေရာကို ရောက်နေပေမဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ကို ရောက်တိုင် ကျနော်စိတ်ထဲမှာ ရှမ်းအိုစည်နဲ့အတူ ကနေစမြဲပါပဲ။ ကယားပြည်နဲ့ လွိုင်ကော်မြို့ မှာ မွေးတဲ့ကျနော့်အတွက်တော့ လွမ်းစရာတွေအများကြီးပါပဲ။
Posted by ကျော်ထက် at 6:15 PM0comments Links to this post